Wararka - 5 sababood oo loogu doorto baakadaha tuubada weelka ugu habboon
5 sababood oo lagu doorto baakadaha tuubada sida weelka ugu habboon
Maalmahan, xirmooyin kala duwan ayaa loo isticmaalay qurxinta. Iyo isticmaalka tuubooyinka tuujinta ayaa si weyn u koraya. Wareejinta iyo dabacsanaanta ayaa ka dhigtay weelka ugu fiican ee buuxiya shuruudaha kala duwan.
Saaxiibtinimo loo isticmaalo
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso ayaa ah inaad daboolka ka qaaddo daboolka iyo qiiqa, adoo u hoggaansamaya kala fur daboolka weelka ama ka soo bixi ka hor isticmaal kasta. Dhanka kale, waa wax fudud oo la qaadan karo. Uma baahnid inaad qaadatid dhalooyin waaweyn / culus ama dhalooyin.
Dhalooyinka dhalooyinka ama dhalooyinka waa kuwo soo jiidasho leh, laakiin aad ayey qaali u yihiin. Iyaga iyo baakadaha dibedda dhammaantood waxay ku darayaan qiimaha badeecada.
In kasta oo tuubooyinku yihiin xulasho la awoodi karo. Qiimuhu wuu hooseeyaa tayaduna way fiican tahay! Waa mid soo jiidasho leh qaabeyntaada gaarka ah.
Si ka duwan caagagga ama dhalooyinka iyo dhalooyinka, tuubooyinku waa kuwo aad u fudud, oo aan jilicsaneyn, keydinta booska iyo ku shaqeynta gaadiidka.
Sababtoo ah tuubooyinka waxaa loo qaabeyn karaa qaabab iyo cabbirro kala duwan, sidaas darteed waa loo kala duwanaan karaa codsiyada kala duwan. Laga soo bilaabo 1ml illaa 500ml, waxay ku habboon tahay maadada 'Essence', kareemka gacanta, shaashadda qorraxda ama shaambo, hagaajinta timaha iyo dhammaan waxyaabaha aad rabto inaad ku jirto. Marka, kala duwanaanshuhu waa faa'iido kale oo aasaasi ah oo la adeegsado weelkan tuubbooyinka ah.
Horumar dhanka teknolojiyada awgeed, walxaha loo adeegsado soo saarida tuubooyinka balaastigga ah ayaa noqdey kuwo jawiga u roon sanadihii la soo dhaafay. Waxaad u dooran kartaa xirmooyinkaan inay yihiin xulashada bey'ada u habboon.
Gaaban sheeko gaaban, kuwani waa faa iidooyinka tuubooyinka sida weelasha qurxinta. Haddii aad tahay soo saaraha wax soo saarka qurxinta, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad tixgeliso isticmaalka tuubooyinka qurxinta. Mashiinkayaga buuxinta tuubada iyo mashiinka wax lagu xidho ayaa kaa caawin kara hadafka.
Marka La xiriir HX Mashiinka hadda, alaab-qeybiyahaaga mashiinka wax lagu rakibo oo hal meel istaago oo aan ku caawinno!